FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA HEELER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika heeler
Alika mpiambina sisin-tany / alika omby ostraliana
Fangaro Harley the Border Collie / Australian Cattle Dog amin'ny faha-7 volana— 'Harley dia alika mpiambina sisintany / alika ostraliana. Afaka mihazakazaka tontolo andro manodidina ny toeram-pambolena izy noho ny heriny rehetra. Eo am-piofanana ho alika miasa any an-tsaha izy. Tiany ny mihazakazaka sy milalao ary koa mandre ny soavaly sy osy. Alika mahay sy mahatoky tokoa izy izay mampitsiky ny olona foana. Ho an'ny fiompiana dia tena mahay mandanjalanja izy. Mampiseho toetra avy amin'ny karazany roa izy. '
Ny alika heeler dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Border Collie ary ny Alika omby ostraliana . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Mercedes the Border Collie / Blue Heeler mifangaro amin'ny 2 taona— 'Mercedes dia fifangaroan'ny Border Collie / Blue Heeler. Tsara toetra izy. Tsy mbola naneho fihetsika mahery setra mihitsy izy. Izaho sy ny vadiko dia nanana zanak'olom-borona ary namelona azy ireo toy ny zanany kely izy. Ny zaza faralahy dia zazakely vao teraka. Napetrany teo akaikin'ny seza miketrika kely foana ireo ankizy. Raha naka ilay zaza ny reniko na ny tenako dia nanara-dia teo aoriany i Mercedes. Mahagaga ihany koa izy amin'ny 2 saka (Snickerdoodles sy Andriamatoa Smitters), ary koa alika hafa . Anisan'ireo namany milalao ... Sammy the Bull bull , Mamatonalina ny Italiana Mastiff , Menaka ny Pit Bull / Boxer mifangaro ), Wookie the Silky Terrier ), Paris the Chipoodle , ary maro hafa. Izy no alika hendry indrindra hitako. Tiany ny milalao baolina tenisy. Mandritra ny fotoan'ny baolina dia mitsambikina toa ahy izy. 5ft 5in aho. Mivadika amin'ny rivotra izy, mitsambikina amin'ny ala sy sakana. Izy koa dia tia basikety, frisbees, baolina kitra, na inona na inona omenao alalana hilalao. Nahazo kiraro ho azy izahay mba hitsakoana izay tena hoditra, efa nananany hatramin'ny 6 volana izy, ary tsy misy ratra aminy. Tsy miraharaha ny maha izy azy izy anjakan'ny zavatra rehetra . Izaho irery no olona tokony hahatongavany manjaka . Tena tsy manana fahazaran-dratsy hafa izy ankoatry ny hoe any ivelany izy ary misy alika hafa mandalo eo dia mientanentana be izy ary te hilalao amin'ilay alika hafa, ary azony antoka fa hisarika ny sain'izy ireo. Mipetraka amin'ny tongony sy tongony aoriana izy toy ny olombelona ary mijery fahitalavitra, ary koa mikororosy ao ambany fonony rehefa tonga ny ora fatoriana. Niasa mafy izahay mivady mampiofana azy . Fantany ny mipetraka, mihozongozona, mandry, mipetraka tsara tarehy ary mitsambikina. Tena tsy mivadika izy ary fiarovana ahy . '
Mercedes the Border Collie / Blue Heeler mifangaro amin'ny 2 taona
Fangaro amin'ny alika Frogle the Border Collie / Australian Cattle amin'ny 2 taona— 'Salama, ity no zanako mahafatifaty' Freckle '. Izy dia sisin-tany Collie niampita tamin'ny Alika Biby Aostraliana (Red Heeler). Izy no manana toetra malemy indrindra indrindra, tia ny olona rehetra. Salama 5, mifanome tanana, miteny sns dia ampahany amin'ny androntsika. Miresaka foana izy, ary manana ny fiteniny manokana ho an'ny saka fotsiny! Tsy mankasitraka ahy handeha hiasa izy , miaraka amina 'milaza zavatra' mibontsina be vantany vao tonga any an-trano aho. Ny fiainako dia mahafa-po izao miaraka amin'ny zanako lahy! Lehibe ny ankizy ary miasa be loatra ny namako ka izy no mpiara-mitory amiko sy namako akaiky indrindra. Manakana ahy eny an-dalambe ny olona hanontany ahy momba azy satria manana loko miloko mahafinaritra sy tsy mahazatra izy. Mipetraka any amin'ny faritra karakaina any atsimon'i Australia izahay ka mifangaro tsara amin'ny vovoka mena eto aminay!
Afangaroy amin'ny alàlan'ny alika mpiambina alika Border Collie / Australian Border amin'ny 2 taona
Afangaroy ny alika mpiambina alika ao anaty sisintany toy ny alika alika kely
Afangaro amin'ny alika Sadie the Border Collie / Australian Cattle Dog amin'ny roa taona— 'Sadie dia nanomboka somary mahia toy ny Border Collie, ary avy eo nitombo ka nitovy tamin'ny fananganana alika alika omby aostralianina. Sadie tsara toetra. Faly foana izy ary mitsiky ary vonona hilalao. Miaraka amin'ny hafa izy alika , saka , sy ny ankizy. Ny hany tadiaviny dia ny mahita namana hiara-milalao aminy. '
Afangaro amin'ny alika Sadie the Border Collie / Australian Cattle Dog amin'ny 2 taona
mpiandry alemanina telo volana
Sadie the Border Collie / Australian Cattle Dog dia mifangaro ho alika kely
Koal the Border Heeler puppy amin'ny faha-4 volana— 'Koal ity. Izy dia 4/4 Blue Heeler efa-4 volana sy 1/4 Border Collie. Vitsy izy, ary tia mangalatra kilalao amin'ireo zokiny vavy lehibe ary manafina azy ireo ary mitolona aminy ho azy rehefa hitany. Izy io dia toy ny cuddlebug kokoa noho ny rahavaviny ary tia mandry eo an-tratran'i Neny sy ny dadany mba hosokafany ny kibony, tena kisarisary fanintona tokoa! Tena izy koa fiarovana ny reniny sy ny rahavavaviny , ary tsy hamela alika na olon-kafa hiditra an-tokotany rehefa any ivelany izy. Tiany koa ny zanak'anabavin-dreniny, heveriko fa satria kely toa azy ireo izy ireo. TIA mihinana lanezy koa izy! (Ary zavatra hafa rehetra eto an-tany momba izany). '
Dusty the Border Collie / Blue Heeler mifangaro amin'ny 3 taona
Lisitry ny alika fiompiana
sisin-collie beagle Mix alika kely
inona no mitovy ny shorkie
mpiandry alemanina 1 taona
alika mpiandry ondry malemy alika hamidy